0.4 oz ecacileyo PMMA (Acrylic) inshorensi kabini zeplastiki umlomo umlomo nge 22-400 entanyeni entanjeni
0.4 ounces PMMA ecacileyo (acrylic) zeplastiki.Small capsule ibhotile ungenza indibaniselwano suit, isiphumo olubonakalayo udonga ibhotile yeplastikhi liphezulu kakhulu grade.Can wabeka iti, amayeza aphezulu-grade, amayeza esintu Chinese kunye nezinye iimveliso ukutya. Uyilo oluphindwe kabini ngaphakathi, ngesiciko esingaphandle sangaphandle unokubona isiciko sangaphakathi esenziwe ngegolide, isiciko sangaphandle kunye nebhotile yomzimba kwisimo se-cylindrical.Printa ilogo yakho eyodwa ngaphezulu kwekepusi okanye ibhotile uphawu lwakho.
I-6 oz ecacileyo ye-PMMA (Acrylic) yeplastiki ebanzi yebhotile yomlomo ene-44-410 yokugqiba kwentamo
Ibhotile yeplastiki enesiciko sesinyithi esivaliweyo, imilo yebhotile kunye neebhotile zebhotile zigcina ubukhulu obufanayo, umzimba webhotile oselubala kunye nodonga lweplastikhi eqinisiweyo yenza imveliso ibe yimpembelelo ebonakalayo. Amayeza amaTshayina, iimveliso zempilo, njl Umlomo webhotile utywinwe ngefoyile ye-aluminium gasket ukuqinisekisa ukutywinwa kwe-100% .umzimba webhotile unokongeza uphawu lwenkampani yakho ukwenza imveliso ibe yodwa ngakumbi.
I-3-5ml umbala wendalo ngenaliti yenaliti yesirinji
Umbala wethu we-3 / 5ml wombala weGel Tubes wenziwe ngezinto ze-PP, ezinokutywinwa okungcono kunye nokuguda. Ingasetyenziswa njengesixhobo sokutofa ijeli engamanzi. Umbhobho ityhubhu encinci-encinci, kwaye umzimba webhubhu uyilelwe ngokweendlela ezahlukeneyo zokusebenzisa kunye neemfuno zokubonelela ngesimo esingcono sesandla kunye nefuthe lokubonisa kwishelufa. Xa usebenzisa, inyathelo lokuqala kukususa isiciko sangaphambili kunye nesembozo esingasemva, inyathelo lesibini kukuthumela ngaphandle iyeza kwilungu lobufazi okanye ezimpundu, kwaye inyathelo lesithathu kukusebenzisa isiciko eside ukutyhala intonga yokutyhala ungene kumbhobho ukutyhala iyeza elikwityhubhu lingene kwilungu lobufazi okanye ezimpundu. Ingasetyenziselwa ukuhanjiswa kweziyobisi kwilungu lobufazi, ukhathalelo lobufazi, ukuhanjiswa kweziyobisi ezimpundu, kunye nokupakishwa kukhathalelo lwasemva. Kulula ukuphatha kwaye usebenzise. Isicelo sethu selungu lobufazi yimveliso yokupakisha yexesha elinye kwaye inokupakishwa ngokukodwa. Ukuba unesimo esingcono, sinokukubonelela ngokulungiswa okwenziwe ngokwezifiso. Ityhubhu yovavanyo oluqhelekileyo
3-5ml ukungafihli kwendalo ngesirinji yenaliti ye-PP
Umenzi-sicelo wethu we-3 / 5ml welungu lobufazi wenziwe ngezinto ze-PP, ezinokutywinwa okungcono kunye nokuguda. Ingasetyenziswa njengesixhobo sokutofa ijeli engamanzi. Umbhobho ityhubhu encinci-encinci, kwaye umzimba webhubhu uyilelwe ngokweendlela ezahlukeneyo zokusebenzisa kunye neemfuno zokubonelela ngesimo esingcono sesandla kunye nefuthe lokubonisa kwishelufa. Xa usebenzisa, inyathelo lokuqala kukususa isiciko sangaphambili kunye nesembozo esingasemva, inyathelo lesibini kukuthumela ngaphandle iyeza kwilungu lobufazi okanye ezimpundu, kwaye inyathelo lesithathu kukusebenzisa isiciko eside ukutyhala intonga yokutyhala ungene kumbhobho ukutyhala iyeza elikwityhubhu lingene kwilungu lobufazi okanye ezimpundu. Ingasetyenziselwa ukuhanjiswa kweziyobisi kwilungu lobufazi, ukhathalelo lobufazi, ukuhanjiswa kweziyobisi ezimpundu, kunye nokupakishwa kukhathalelo lwasemva. Kulula ukuphatha kwaye usebenzise. Isicelo sethu selungu lobufazi yimveliso yokupakisha yexesha elinye kwaye inokupakishwa ngokukodwa. Ukuba unesimo esingcono, sinokukubonelela ngokulungiswa okwenziwe ngokwezifiso.
I-3ml epinki yendalo yokuhambisa iziyobisi kwiVagino-anal
Umshini wethu we-3ml we-Vacuum Gel Tube wenziwe ngezinto ze-PP, ezinokutywinwa okungcono kunye nokuguda. Ingasetyenziselwa isixhobo sokuhambisa iziyobisi sejel. Ityhubhu yityhubhu encinci enobubanzi obujikeleze ityhubhu. Uyilo lobume beklasikhi lunokubonelela ngokuziva ngcono kunye nefuthe lokubonisa kwishelufa. Xa usebenzisa, inyathelo lokuqala kukususa isiciko sangaphambili kunye nesembozo esingasemva, inyathelo lesibini kukuthumela ngaphandle iyeza kwilungu lobufazi okanye ezimpundu, kwaye inyathelo lesithathu kukusebenzisa isiciko eside ukutyhala intonga yokutyhala ungene kumbhobho ukutyhala iyeza elikwityhubhu lingene kwilungu lobufazi okanye ezimpundu. Ingasetyenziselwa ukuhanjiswa kweziyobisi kwilungu lobufazi, ukhathalelo lobufazi, ukuhanjiswa kweziyobisi ezimpundu, kunye nokupakishwa kukhathalelo lwasemva. Kulula ukuphatha kwaye usebenzise. Isicelo sethu selungu lobufazi yimveliso yokupakisha yexesha elinye kwaye inokupakishwa ngokukodwa. Ukuba unesimo esingcono, sinokukubonelela ngokulungiswa okwenziwe ngokwezifiso.
Isirinji yenaliti ye-5ml bule yendalo
Isirinji yethu ye-5ml evulekileyo yelungu lobufazi / yesirinji yenziwe ngezinto ze-PP, ezinokutywinwa okungcono kunye nokutyibilika. Ingasetyenziswa njengesixhobo sokutofa ijeli engamanzi. Umbhobho yityhubhu encinci enobubanzi obuncinci obunomzimba omncinci. Ngokweendlela zokusebenzisa ezahlukeneyo kunye neemfuno, inokubonelela ngesimo esingcono sesandla kunye nefuthe lokubonisa kwishelufa. Xa usebenzisa, inyathelo lokuqala kukususa isiciko sangaphambili kunye nesembozo esingasemva, inyathelo lesibini kukuthumela ngaphandle iyeza kwilungu lobufazi okanye ezimpundu, kwaye inyathelo lesithathu kukusebenzisa isiciko eside ukutyhala intonga yokutyhala ungene kumbhobho ukutyhala iyeza elikwityhubhu lingene kwilungu lobufazi okanye ezimpundu. Ingasetyenziselwa ukuhanjiswa kweziyobisi kwilungu lobufazi, ukhathalelo lobufazi, ukuhanjiswa kweziyobisi ezimpundu, kunye nokupakishwa kukhathalelo lwasemva. Kulula ukuphatha kwaye usebenzise. Isicelo sethu selungu lobufazi yimveliso yokupakisha yexesha elinye kwaye inokupakishwa ngokukodwa. Ukuba unesimo esingcono, sinokukubonelela ngokulungiswa okwenziwe ngokwezifiso.
I-5ml yendalo yokuhambisa iziyobisi kwiVagino-anal
Isirinji yethu ye-5ml yejeli yenziwe ngezinto ze-PP, ezinokutywinwa okungcono kunye nokutyibilika. Ingasetyenziselwa isixhobo sokuhambisa iziyobisi sejel. Ityhubhu yityhubhu encinci enobubanzi obujikeleze ityhubhu. Ngaba unokubonelela ngokuziva ngcono kunye neshelf yokubonisa isiphumo. Xa usebenzisa, inyathelo lokuqala kukususa isiciko sangaphambili kunye nesembozo esingasemva, inyathelo lesibini kukuthumela ngaphandle iyeza kwilungu lobufazi okanye ezimpundu, kwaye inyathelo lesithathu kukusebenzisa isiciko eside ukutyhala intonga yokutyhala ungene kumbhobho ukutyhala iyeza elikwityhubhu lingene kwilungu lobufazi okanye ezimpundu. Ingasetyenziselwa ukuhanjiswa kweziyobisi kwilungu lobufazi, ukhathalelo lobufazi, ukuhanjiswa kweziyobisi ezimpundu, kunye nokupakishwa kukhathalelo lwasemva. Kulula ukuphatha kwaye usebenzise. Isicelo sethu selungu lobufazi yimveliso yokupakisha yexesha elinye kwaye inokupakishwa ngokukodwa. Ukuba unesimo esingcono, sinokukubonelela ngokulungiswa okwenziwe ngokwezifiso.
I-5ml epinki yendalo yokuhambisa iziyobisi kwiVagino-anal
I-5ml yethu yeplastice yokufaka isicelo sangasese yenziwe ngezinto ze-PP, ezinokutywinwa okungcono kunye nokutyibilika. Ingasetyenziselwa isixhobo sokuhambisa iziyobisi sejel. Ityhubhu yityhubhu encinci enobubanzi obujikeleze ityhubhu. Uyilo lobume beklasikhi lunokubonelela ngokuziva ngcono kunye nefuthe lokubonisa kwishelufa. Xa usebenzisa, inyathelo lokuqala kukususa isiciko sangaphambili kunye nesembozo esingasemva, inyathelo lesibini kukuthumela ngaphandle iyeza kwilungu lobufazi okanye ezimpundu, kwaye inyathelo lesithathu kukusebenzisa isiciko eside ukutyhala intonga yokutyhala ungene kumbhobho ukutyhala iyeza elikwityhubhu lingene kwilungu lobufazi okanye ezimpundu. Ingasetyenziselwa ukuhanjiswa kweziyobisi kwilungu lobufazi, ukhathalelo lobufazi, ukuhanjiswa kweziyobisi ezimpundu, kunye nokupakishwa kukhathalelo lwasemva. Kulula ukuphatha kwaye usebenzise. Isicelo sethu selungu lobufazi yimveliso yokupakisha yexesha elinye kwaye inokupakishwa ngokukodwa. Ukuba unesimo esingcono, sinokukubonelela ngokulungiswa okwenziwe ngokwezifiso.
I-0.3 0.5 oz emhlophe iHDPE ibhotile yokuthambisa nge-8-400 yokugqiba kwentamo
Sineesayizi ezimbini kule bhotile yeplastiki yeliso: 0.3oz / 8ml kunye no-0.5oz / 15ml. Ibhotile yokuhambisa into yenziwe ngeHDPE. Umphezulu webhotile unokuprintwa okanye uphathwe nge-adhesive. I-logo eyenziwe yinkampani yakho inokwenziwa ukuphucula umphumo wenkampani yakho. Ubume bebhotile yeplastiki bumbane, kukubonelela ngamava angcono kunye neshelfji yokubonisa. Qinisekisa ukuba imveliso iyi-100% yokutywina.Ingasetyenziselwa isikhongozeli samehlo, ukupakishwa kweoyile kubalulekile, iibhotile zepakethe yecigarette, iibhotile zamehlo ezingenazintsholongwane, iibhotile zelahlo ezilahlwayo.
5ml isirinji yendalo yenaliti yesirinji
I-5ml yethu yelungu lobufazi / isirinji yenziwe ngezinto ze-PP, ezinokutywinwa okungcono kunye nokutyibilika. Ingasetyenziswa njengesixhobo sokutofa ijeli engamanzi. Umbhobho yityhubhu encinci enobubanzi obuncinci obunomzimba omncinci. Ngokweendlela zokusebenzisa ezahlukeneyo kunye neemfuno, inokubonelela ngesimo esingcono sesandla kunye nefuthe lokubonisa kwishelufa. Xa usebenzisa, inyathelo lokuqala kukususa isiciko sangaphambili kunye nesembozo esingasemva, inyathelo lesibini kukuthumela ngaphandle iyeza kwilungu lobufazi okanye ezimpundu, kwaye inyathelo lesithathu kukusebenzisa isiciko eside ukutyhala intonga yokutyhala ungene kumbhobho ukutyhala iyeza elikwityhubhu lingene kwilungu lobufazi okanye ezimpundu. Ingasetyenziselwa ukuhanjiswa kweziyobisi kwilungu lobufazi, ukhathalelo lobufazi, ukuhanjiswa kweziyobisi ezimpundu, kunye nokupakishwa kukhathalelo lwasemva. Kulula ukuphatha kwaye usebenzise. Isicelo sethu selungu lobufazi yimveliso yokupakisha yexesha elinye kwaye inokupakishwa ngokukodwa. Ukuba unesimo esingcono, sinokukubonelela ngokulungiswa okwenziwe ngokwezifiso.
Ukucaciswa kwe-5ml yendalo ye-PP ende yokuhambisa iziyobisi kwiVagino-anal
I-5g yethu ye-Gel Gel Tube yenziwe ngezinto ze-PP, ezinokutywinwa okungcono kunye nokutyibilika. Ingasetyenziselwa isixhobo sokuhambisa iziyobisi sejel. Umbhobho yityhubhu encinci enobubanzi obuncinci obunomzimba omncinci. Ngokweendlela zokusebenzisa ezahlukeneyo kunye neemfuno, inokubonelela ngesimo esingcono sesandla kunye nefuthe lokubonisa kwishelufa. Xa usebenzisa, inyathelo lokuqala kukususa isiciko sangaphambili kunye nesembozo esingasemva, inyathelo lesibini kukuthumela ngaphandle iyeza kwilungu lobufazi okanye ezimpundu, kwaye inyathelo lesithathu kukusebenzisa isiciko eside ukutyhala intonga yokutyhala ungene kumbhobho ukutyhala iyeza elikwityhubhu lingene kwilungu lobufazi okanye ezimpundu. Ingasetyenziselwa ukuhanjiswa kweziyobisi kwilungu lobufazi, ukhathalelo lobufazi, ukuhanjiswa kweziyobisi ezimpundu, kunye nokupakishwa kukhathalelo lwasemva. Kulula ukuphatha kwaye usebenzise. Isicelo sethu selungu lobufazi yimveliso yokupakisha yexesha elinye kwaye inokupakishwa ngokukodwa. Ukuba unesimo esingcono, sinokukubonelela ngokulungiswa okwenziwe ngokwezifiso.
I-1.7 oz ebomvu iHDPE ibhotile yokuthambisa nge-12-400 yokugqiba kwentamo
Ibhotile yethu ebomvu eyi-50ml yenziwe ngezinto ze-HDPE. Ibhotile ithe tyaba. Umphezulu webhotile unokuprintwa okanye uphathwe ngesincamathelisi. Ngaba unokwenza ilogo yenkampani yakho, yonyuse isiphumo sophawu lwenkampani yakho. Ubume bebhotile yeplastikhi bumbumbene, ikunikezela ngamava wesandla esingcono kunye nesiphumo seshelufu. Ikepusi ibhotile isebenzisa Screw cap kunye uphawu iplagi ukuqinisekisa 100% ukutywina imveliso. Ingasetyenziselwa ukuhambisa kunye nokugcina i-liquids ezininzi.